‘Syria Untold’ – Siria Tsy Voalaza : Fitantarana Ny Revolisiona Tany Siria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2013 3:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Nederlands, srpski, عربي, Italiano, Dansk, Català, Deutsch, русский, Ελληνικά, English
Roa taona mahery taorian'ny fitroarana Siriana ary satria mbola mitohy ny ady eny an-kianja, Siria vaovao vantambatana sy mpamorona no teraka taorian'ny folo taona nitokana-monina sy tao anaty fahanginana. Avy amin'ireo fitokonana mankamin'ny fitorevahana andalam-be, avy amin'ireo hira noforonina sy sorabaventin'ireo olom-pirenena marobe tsy tambo hisaina, mitohy ny fanoherana isan'andro anoherana ny didiko fe-lehibe, izay tsy dia taterin'ireo media mahazatra.
Nandritra ny volana vitsivitsy, niara-niasa tamina vondron'ireo mpanao gazety Siriana, mpanoratra, mpanamboatra rindram-baiko, ary ireo mpanome endrika monina any Siria sy any ivelany aho mikasika tetikasa iray media mifantoka amin'ny teknika fitantarana ny revolisiona tany Siria. Ankehitriny vonona izahay hanomboka handefa ny “Syria Untold” – Siria tsy voalaza. Andro lehibe ho anay ny 14 May
Ny tetikasanay dia manambatra ireo votoaty notsongaina tamin'ny media sosialy sy ny vaovao nangonina sy nozarain'ireo mpikatroka mafàna fo avy eny ifotony miaraka aminà votoaty dika fototra noforonin'ny tarikay. Manana dika roa izahay, Anglisy sy Arabo.
Izahay dia hifantoka amin'ny tantaran'ny fitroarana hita amin'ny alàlan'ny fanentanana eny ifotony, ny fitokonana faobe, ny zavakanto ary ny asa famoronana. Ny tantaran'ireo feo izay mazàna no tsy mba mahazo ny fitateran'ireo fampahalalam-baovao mahazatra. Ny tantaran'ny fanoherana isan'andro izay mitohy na dia eo aza ny fitomboan'ny miaramila eny an-toerana ary koa na eo aza ny ezaky ny fitondràna hampangiana izay rehetra mety ho endrika fenhoan-kevitry ny olom-pirenena. Te-hanasongadina ireny feo ireny izahay ary hanampy ny hafa hahatakatra azy ireny ao anatin'ny vanim-potoanany.
Hiara-dia amin'ny Global Voices Online ny Syria Untold – Siria Tsy Voalaza. Ireo lahatsoratry ny “Siria Tsy Voalaza” dia hoavoakan'ireo mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices ary hadikan'ireo mpandika teny antsitrapo, ho fandraisan'anjaran'ny GV amin'ny fanomezan-danja ny feon'ny olom-pirenena ary ny fandraisan'andraikitra miainga avy any ifotony.
Mila ny fanampian'ny isam-batan'olona izahay mba hahatongavana amin'izany, noho izany mijanona miaraka amin'ny #syriauntold!
Mikasika an'i Siria tsy voalaza
“Siria Tsy Voalaza” dia tetikasa media tsy miankina iray mitrandraka ny fitantarana ny tolona Siriana sy ireo endrika samihafan'ny fanoherana. Tarika iray izahay, misy Siriana mpanoratra, mpanao gazety, mpanamboatra rindram-baiko ary mpanome endrika, miaina eto a-toerana sy any ivelany, miezaka ny hanome lanja ny fitantarana ny fanovàna Siriana, izay soratan'ireo Siriana mian-dahy miam-bavy isan'andro vaky. Avy amin'ny alàlan'ireo endrika vao mipongatry ny hetsi-panentanana maro avy eny ifotony, ireo fandrindràna sy fitantanana ataon-tena ary ireo fihetsiketsehana tsy manampiafaran'ny fahaiza-mamoron'ny olon-tsotra, nipongatra ny Siria iray vantambantana, taorian'ny folo taona nisiam-pamoretana sy nijaliana. Miaraka amin'ireo media mahazatra tsy mitsahatra mifantoka bebe kokoa amin'ny endrika “géostrategiques” sy miaramila, ary zara raha mijery ny hetsika mavitrika manomboka mivoatra eo an-toerana, mino izahay fa mbola maro ireo karazana ady any Siria no tsy mbola voatatitra, tantara maro izay tsy tiantsika ho hita adino.
Tonga soa ato amin'ny tantaran'ny fanoherana sy famoronana isanandro. Tonga soa ato amin'ny “Siria tsy voalaza”